FAQs-Yantai Fushan Nanhua Packing Factory
1. Inona ny rafitry ny famonosana tokony ilaiko amin'ny vokatrao?Ary inona ny androm-piainan'izy io?
Valiny: Anontanio anay momba ny vaovao: inona ny votoatiny;ny habeny;famenoana, sterilizing ary fitehirizana fepetra, avy eo dia hanolotra ny mety sy ara-toekarena vahaolana hamenoana ny talantalana fangatahana.
2. Inona no atao hoe fitaovana laminated?
Valiny: Akora iray misy sosona maromaro misy akora samy hafa mitambatra mba ho ravin-taratasy tokana.Ny sosona singa dia mifamatotra suing adhesives.Ny tanjona amin'ny fampifangaroana fitaovana samihafa dia ny hamorona akora vaovao miaraka amin'ny fitambaran'ny fananana tsy azo avy amin'ny akora tokana.
3. Inona no atao hoe sarimihetsika "metaly"?
Valiny: Sarimihetsika vita amin'ny metaly dia plastika izay misy akanjo manify metaly ampiharina aminy.Amin'ny ankapobeny dia aluminium no ampiasaina.Ny fomba mahazatra indrindra amin'ny famokarana sarimihetsika metaly dia fantatra amin'ny hoe vacuum metallisation.Ny fametahana metaly dia vita amin'ny alàlan'ny fanamainana tariby aluminium mandra-pahalevonany ara-bakiteny ary manarona ny sarimihetsika plastika.Ny sarimihetsika plastika matetika ampiasaina dia PET.Ny sarimihetsika vita amin'ny aluminium dia misy fiantraikany amin'ny haingon-trano mamirapiratra.Fanampin'izany, ny sarimihetsika metaly dia nanampy fananana sakana ary amin'ny rafitra laminate dia afaka manatsara ny fiarovana ny entona sy ny hamandoana.
4. Nahoana ny Nylon no ilaina amin'ny kitapoko?
Valiny: Na dia lafo aza ny vidiny, ny sarimihetsika Nylon dia tsara ho an'ny sakana oksizenina sy ny herin'ny fiantraikany. Indrindra raha ny kitapo dia tokony ho fenoina amin'ny alalan'ny na mitete mahatohitra ilaina, dia ilaina.